Wararka Maanta: Khamiis, May 10, 2012-Dad shacab ah oo ku dhintay Qarax lala beegsaday ciidammo ka tirsan kuwa DKMG iyo Iskahorimaad dhexmaray ciidammo kale
Qaraxa lagu weeraray ciidamada oo ka dhacay inta u dhexesa isgoyska Baar Ubax iyo isgoyska Carwo Idko ee jidka soddonka ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo rayid ah iyadoo ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale oo iyagana shacab ahaa.
Goobjoogayala ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid ka dhashay bambaano askarta lagu tuuray ayna arkeen khasaaraha soo gaaray dadka shacabka ah yadoo aan la ogeyn khasaaraha gaaray ciidamadii lagu weeraray qaraxaas.
Ma jirto cid sheegatay inay mas'uul ka tahay weerarkaas, iyadoo markaas kaddib uu jidku xirmay inkastoo daqiiqado kaddib uu dib u furmay, waxaana qaraxan uu kusoo beegmayaa xilli ay sii kordhayaan qaraxyada ka dhacaya Muqdisho.
Dhanka kale; askari ayaa lagu dilay qof kale oo shacab ahna dhaawac ayaa kasoo gaaray iska-horimaad ku dhexmaray jidka warshadaha gaar ahaan inta u dhexeysa garoonka kubadda cagta Muqdisho iyo warshaddii hore ee sigaarka iyo tarraqa ciidammo ay halkaas isbaaro u taallay iyo ciidammo kale oo dowladda ka tirsan.
Iska-horimaadkan ayaa wuxuu u dhexeeyay ciidammo doonayay inay goobtaas ka qaadaan isbitaaro u tiillay ciidammo ka tirsan kuwa dowladda, balse waxaa looga itaal roonaaday ciidamadii weerarka ahaa.
Goobtii uu iska horimaadku ka dhacay ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamadii horay ugu sugnaa ee ay isbaaradu u taallay, iyadoo saraakiisha dowladda ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan iskahorimaadkaas.